02/10/2018 - Page 4 sur 4 -
«Mandalo fitsapana !»
Vao mahazo fanjakana ny MAPAR dia miverina eny anivon’ny fiarahamonina indray ny resaka « bois de rose ». Tena loza mihitsy ireto MAPAR sy TGV ireto, vao mahazo fahefana kely dia ny resaka « bois …Tohiny
Fahasalamana : Hitsabo any Mananjary ny Médecin de l’océan indien
Hirodorodo any Mananjary indray ireo fianakaviamben’ny dokotera sy ny manam-pahaizana manokana avy amin’ny Médecin de l’océan indien (MOI), ny 8 ka hatramin’ny 18 oktobra ho avy izao. Hitsabo maimaim-poana ireo mponina mila fitsaboana any an-toerana. …Tohiny
Taorian’ilay sakoroka naharitra hateloana tany Analahiva Morondava, ny faran’ny herinandro lasa teo, dia nanao ny fisamborana avy hatrany ny zandary. Vokany, folo no efa voasambotra. Araka izany, niteraka tsy fitoniana tany an-toerana izany, satria dia …Tohiny
Miraviravy tanana tsy mahita izay horaisina ny governemanta Ntsay, manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana, saika manerana an’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Isan’andro mantsy dia misy hatrany, na fanafihana mitam-piadiana, na vonoan’olona tsotra izao noho …Tohiny
Nandray andraikitra avy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina, raha vao nandre iny lozam-pifamoivoizana tany Ankazobe iny. Izy tenany mihitsy no tonga teny amin’ny Hjra , nankahery ireo naratra tao amin’ny hopitaly. Nisy ny valopy fankaherezana ...Tohiny